Hargaysi ma xorowday | Gabiley News Online
Hargaysi ma xorowday
Waxa jiray dhaqan xun oo laga dhaxlay digtaatoorkii Afwayne kaa oo markuu meel u socdaalayo waddooyinka loo xidhi jiray, Sababtuna ay ahayd isagoo ka baqanaya shicibka illeen wuxuu ahaa gacan ku dhiigle, godobbo badan tunka ku sitee.
Haddaba waxa nasiib darro ahayd in madaxwayne Riyaale iyo madaxwayne Siilaanyo sidii digtaatoorada u dhaqmayeen markay safar geliyaan. Iyadoo Hargaysa cidhiidhi tahay oo baabuurtii meel ay marto laadahay ayaa haddana la xidhi jiray waddada ugu muhiimsan magaalada. Oo saacado badan magaaladu iyaga u xidhnaan jirtay. Waxa isgoysyada oo dhan la dhigi jiray askar koofiyad cas ah. Waxa dariiqyada qasab lagu safi jiray carruurta dhigata dugsiyada hoose. Markay ka soo degayaan madaarka waxa qasab lagu keeni jiray dad soo dhoweeya oo iskugu jira haween, caruur, suldaano, caaqillo, afmishaarro, golaha wasiirada oo dhan, xildhibaanada labada gole iyo ciidamada dalka ee kala duwan. Waxa halis galisay nabad gelyada madaarka. Dawladdu maalintaa ma shaqaynayn oo waxa la wada tunnaa madaarka. In badan ayay ka cawdeen ganacsatada, baslayda iyo dadwaynuhuba magaalada la xidhayo hase yeeshee cidi dheg jalaq uma siin.
Waxa haddaba keenay hawo cusub oo caafimaad oo dadka muwaadiniinta ah ee magaalada deggen xurmaynaya madaxwaynaha cusub mudane Biixi. Safarkiisii u horreeyey ee haddeertu cidi ma dareemin. Wuxuu noqday nin la siman muwaadiniinta kale oo markuu safar shaqo u baxayo aan durbaanno tuman. Waa nin magaalada in badan deggenaa oo og xaaladaha dhabtaha ee magaalada iyo dadkuba ku sugan yihiin. Hargaysi xorowday! Waxaana mar saddexaad xoreeyay Muuse Biixi.
A. Amir Bidde Nuur